Jehova bụ Chineke nke ndị dị ndụ | Bịaruo Chineke Nso
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lithuanian Malagasy Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Ọnwụ ọ̀ ka Chineke ike? Mbanụ! Olee otú ọnwụ ma ọ bụ “onye iro” ọ bụla ọzọ ga-esi aka “Chineke bụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile” ike? (1 Ndị Kọrịnt 15:26; Ọpụpụ 6:3) Chineke nwere ikike ọ ga-eji emeri ọnwụ. Otú ọ ga-esi emeri ya bụ na ọ ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ. O kwekwara nkwa na ọ ga-akpọlite ha n’ọnwụ n’ụwa ọhụrụ ya. * Olee otú anyị si mara na Chineke ga-emezu nkwa ahụ? Ọkpara Chineke bụ́ Jizọs gwara anyị ihe ga-eme ka obi sie anyị ike na Chineke ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ.—Gụọ Matiu 22:31, 32.
Mgbe Jizọs na-agwa ndị Sadusii okwu, bụ́ ndị sịrị na mbilite n’ọnwụ adịghị, ọ sịrị: “Banyere mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, ọ̀ bụ na unu agụghị ihe Chineke gwara unu, sị, ‘Abụ m Chineke Ebreham na Chineke Aịzik na Chineke Jekọb’? Ọ bụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama nke ndị dị ndụ.” Ihe Jizọs kwuru ebe a bụ ihe Chineke gwara Mozis n’akụkụ otu osisi na-enwu ọkụ n’ihe dị ka puku afọ atọ na narị afọ ise gara aga. (Ọpụpụ 3:1-6) Ihe a Jizọs kwuru na Jehova gwara Mozis, nke bụ́ ‘Abụ m Chineke Ebreham na Chineke Aịzik na Chineke Jekọb,’ gosiri n’eziokwu na a ga-akpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ?
Ọ ga-adị mma ka anyị buru ụzọ mata mgbe Jehova gwara Mozis ihe ahụ. Mgbe Jehova kwuru ihe ahụ, Ebreham, Aịzik, na Jekọb anwụọlarị. N’oge ahụ, o ruola narị afọ atọ na iri afọ abụọ na itoolu Ebreham nwụrụ. O ruokwala narị afọ abụọ na iri afọ abụọ na anọ Aịzik nwụrụ, ruokwa otu narị afọ na iri afọ itoolu na asaa Jekọb nwụrụ. N’agbanyeghị na ọ dịla ezigbo anya ha nwụrụ, Jehova sịrị, “Abụ m Chineke” ha, ọ sịghị “O nwere mgbe m bụ Chineke” ha. Jehova kwuru okwu ka à ga-asị na ndị nna ochie atọ ahụ ka dị ndụ. Gịnị mere Jehova ji kwuo okwu otú ahụ?
Jizọs kwuru, sị: ‘Jehova abụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama nke ndị dị ndụ.’ Chegodị echiche ihe ihe a Jizọs kwuru pụtara. Ọ bụrụ na mbilite n’ọnwụ adịghị, ihe ọ pụtara bụ na Ebreham, Aịzik, na Jekọb agakwaghị adị ndụ ọzọ. Ọ bụrụkwa na ha adịghị ndụ ọzọ, Jehova ga-abụzi Chineke nke ndị nwụrụ anwụ. Ihe ọ pụtaziri bụ na ọnwụ ka Jehova ike, ya bụ, na ike adịghị Jehova ịnapụta ndị ohu ya n’aka ọnwụ.
Oleezi ihe anyị nwere ike ikwu banyere Ebreham, Aịzik, Jekọb, na ndị ohu Jehova ndị ọzọ nwụrụ anwụ? Jizọs kwuru, sị: “N’ebe ọ nọ, ha niile dị ndụ.” (Luk 20:38) N’eziokwu, o doro Jehova anya na ya ga-akpọlite ndị ohu ya nwụrụ anwụ n’ọnwụ nke na ọ na-echeta ha ka à ga-asị na ha ka dị ndụ. (Ndị Rom 4:16, 17) Jehova ga na-echeta ndị ohu ya niile nwụrụ anwụ ruo mgbe ọ ga-akpọlite ha n’ọnwụ. Ihe mere o ji dị otú ahụ bụ na Jehova zuru okè, o nweghị onye ọ ga-echefu n’ime ha.
Jehova ka ọnwụ ike
Ọ̀ ga-adị gị mma ịhụ mgbe a ga-akpọlite ndị ị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ? Ya bụrụ otú ahụ, cheta na Jehova ka ọnwụ ike. N’ihi ya, o nweghị ihe ga-egbochi Jehova ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. Ọ́ gaghị adị mma ka ị mụtakwuo banyere Chineke nakwa banyere nkwa ahụ o kwere? I mee otú ahụ, gị na Jehova, bụ́ ‘Chineke nke ndị dị ndụ,’ ga-adịkwu ná mma.
Ebe anyị na-atụ aro ka ị gụọ na Baịbụl n’ọnwa Febụwarị: Matiu 22-28–Mak 1-8
^ para. 3 Ị chọọ ịmụtakwu banyere nkwa ahụ Chineke kwere, nke bụ́ na ya ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ ka ha dịrị ndụ n’ụwa ọhụrụ, gụọ isi nke 7 nke akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.